အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: စားကြည့်စေချင် ငါးထမင်းချဉ်
40 Responses to “စားကြည့်စေချင် ငါးထမင်းချဉ်”
ရူး ရှလွတ် ပေါ့တယ် ၊ ဟင်းချိုကကောင်းတယ် အရသာရှိတယ် နဲနဲချည်နေသလိုဘဲ စပ်လိုက်တာရှုး ကောင်း
ပျော်စရာကြီးနော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီးစားရတာ၊
sar chin lite tar...
စား..စား..စားကြမယ်ဟေ့ကောင်းကောင်း ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတောင် သတိရမိသေး :)
ငါ့အစ်မ တော်ချက် :)
ထမင်း ကို စက် ရှေ့ မှာပဲ စားဖြစ် နေတော့စား နေရင်းနဲ့မချောရဲ့ငါးထမင်းချဉ်သုပ်
လေး လာကြည့်မိတော့၊ ကိုယ်စား နေတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတောင် မေ့နေတော့ တယ်ဗျာ...။
ငါးထမင်းချဉ်ကို ရန်ကုန်နေတုန်းက အမေက ခဏခဏ
ငါးထမင်းချဉ်ကို လွမ်းတာနဲ့ အမေ့ကိုပါ သတိရသွားတယ်
အားလူးတစ်လုံးက နဲနဲအနာပါလို့ ဖဲ့ပြီး အခွံခွာထားတာလားဗျ :)
ဟဲဟဲ ဖတ်ရင်းတောင် သွားရည်ကျတယ် ဆောင်း က အဲ့လို ငါးထမင်းချဉ်တို့ ၀က်သားထမင်းချဉ် တို့ အရမ်းကြိုက်တာ မမ ရဲ့ ။ ဟွန့်နော် စိတ်ဆိုးတယ် ညီမ ကိုတော့ စားဖို့ ဖုန်းဆက်မခေါ်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် မခေါ်တာလဲ တမျိုးကောင်းတယ် ဟိဟိ နို့မို့ဆို ညီမလေး စားတာနဲ့ မမ ဖို့တောင် ကျန်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ :P :) မမ ရဲ့ ဟင်းတွေအတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်
သွားရည်တောက်တောက်ကျသွားတယ်ဗျို့...။ငါးထမင်းချဉ် မစားရတာ နှစ်ချီနေပြီ။စားချင်လိုက်တာဗျာ...။
ငါးထမင်းချဉ် အရမ်းကြိုက်ပါတယ် မစားရတာ အတော်ကြာသွားပြီ စားချင်တာဗျာ
မမချော သစ်ခုပဲအပြင်ကပြန်တာနော် ရက်စက်လိုက်တာ ဟင့်...
ငါးထမင်းချဉ်လုပ်ရတာ လွယ်မယ်မှတ်လို့၊ လက်တော့ အ၀င်သားနော်။ ချောရဲ့ နည်းအတိုင်း စမ်းလုပ်ကြည့်အုံးမယ်။
ဒါနဲ့ ချောရေ ... ခေါင်းစဉ်မှာ စာကြည့်စေချင် ဖြစ်နေတယ်။ စားကြည့်စေချင် ဖြစ်မယ် ထင်တယ်နော်။ ၀စ္စနှစ်လုံးပေါက် ကျန်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ အမကကျောင်းပိတ်ရက်မို့ စာကြည့်ရမှာ ကြောက်နေလို့ ... :)
မမေဓာဝီရေ.. ပြင်လိုက်ပါပြီ.. မမြင်လိုက်မိဘူး တကယ်ကို ကျေးဇူးနော်း)ထမင်းချဉ်စားပြီး နည်းနည်းရှမ်းသွားတယ် ;)
ဆိုင်မှာ ခဏခဏစားဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာတော့ တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး။ မ လက်ရာလေးက သိပ်စားလို့ ကောင်းမယ့်ပုံပဲ =)
စားချင်စိတ်ပေါက်လာပြီနော်။ အဲဒါမျိုးတွေ ဒီမှာ စားရဘူး။ အမချောက ဟင်းချက်လဲ ပိုင်မှပိုင်ဘဲ။ ကြည့်တာနဲ့တင် တကယ်စားသောက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။
မနက်စာ ဘာမှ မစားရသေးခင် ငါးထမင်းချဉ် နဲ့ တွေ့သွားတယ် သရေ ကျလာပြီ ရှိတဲ့ ပဲပြုတ်လေး နဲ့ဘဲ သွားစားတော့မယ် ညီမ အပင်ပန်းခံပြီး ချက်နည်းပြောပြထားတာ ကျေးဇူးနော် တနေ့လုပ်စား မယ် ချစ်ချစ်ကြီးကတော့ အရမ်းကြိုက်
မြသွေးနီတို့က ကိုးနတ်ရှင်တန်ခိုးနဲ့ အစားဆို အမြဲနောက်ကျတယ်။
ကျန်မှကျန်သေးရဲ့လားမသိ။ ကြွားလိုက်ဦးမယ်။ မ..လည်း ငါးထမင်းချဉ်လုပ်တတ်တယ်။ ရုံးက ညီမရှမ်းမလေးဆီက သင်ထားတာ။ အရမ်းကြိုက်။ ဂျူးမျှစ်လေးနဲ့ ကျွတ်ကျွတ်ဝါးစားလိုက်လို့ကတော့ ၂ပွဲလောက်အသာလေးပဲ။ ပြောရင်းစားချင်လာပြီ ..ချောရေ..။
ငါးထမင်းချဉ်အရမ်းကြိုက်တယ်. . . လုပ်မစားဖြစ်တာတောင်ကြာပြီ.. . :P
ဆာနေတဲ့ အချိန်ရောက်လာတာ စားချင်စရာနဲ့ တည့်တည့်တိုးနေပါလား...
ချော လုပ်ထားတာ စားချင်စရာလေး...
လက်ဝင်လို့ ခဏ ခဏ လုပ်မစားဖြစ်ဖူး...
ဒီတပတ်တော့.... အချိန်ရရင် လုပ်စားအုံးမယ်...း))
စားချင်တယ်...ရှမ်းစာဆို အားလုံးကြိုက်မှ ကြိုက်....လုပ်ကျွေးပါ ချောရေ.....:))
ချောရေ...ရှမ်းပြည်ကလာတော့ ထမင်းချဉ်ဆို ကြိုက်ပြီးသားပဲ...။
အပျိုကြီးရေ လုပ်စားရမှာ ပျင်းတယ်ဗျာာာာာ လာလည်ရင် လုပ်ကျွေးဗျာ ဒါဗြဲ
ရန်ကုန်မှာတော့ ဝယ်စားတယ် ဟီးးး မလုပ်တတ်လို့ ဒီမှာကတော့ စားချင်ရင် ကိုယ်တိုင်လုပ်စားမှပဲဖြစ်တော့မှာလေ ကိုယ်ကလဲ မလုပ်တတ်ဆိုတော့ ဟက်ဟက်
Ma, Very good .....
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ အစားအစာပါ ... ဈေးနေ့မှာ ကြုံတိုင်း စားဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ... ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ...
( ၃၅ )နှစ်လောက်ကပေါ့ ...
ချော............( အကျယ်ကြီး အော်ခေါ်လိုက်တယ်)
ဟီးးးးးးးးး အဲ့ဒါ စားချင်တယ် အရမ်း......ကို ကြိုက်တယ် .......
သို့သော် ဒီမှာ အဲ့ငါးမရှိ ဂျူးမရှိး(
P.s 'ချော' ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကြိုက်လို့ ညီမလေးက 'ချော' လို့ပဲ ခေါ်ခေါ်နေတာ ။ ညီမလေးထက် အသက်ကြီးကောင်းကြီးနိူင်တယ်။ ညီမလေးက 'ချော' လို့ ခေါ်တိုင်း အရှေ့မှာ (မ) ပါတယ်လို့မှတ်ပေးနော်း)
ငါးထမင်းချဉ်အရမ်းကြိုက်..လုပ်စားမယ်..ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ..တနင်္ဂနွေတုန်းက အမပြောပြတဲ့အတိုင်း ငါးသံပုရာပေါင်းနဲ့ ငါးကင်လုပ်စားဖြစ်တယ်..ဒီတပတ် သူငယ်ချင်းတွေအိမ်လာရင် ငါးထမင်းချဉ်လုပ်စားမယ်....ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမချောရေ.....
မချောပြောတဲ့ ငါးထမင်းချဉ်လုပ်စားရင်ကောင်းမလား ဖတ်ကြည့်ပါတယ်
မရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကများနေလို့ စိတ်လျှော့လိုက်ပါပြီ :P
ညီမလေးက ငါးမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါ့အစ်မလုပ်ပြထားတာလေးက စားချင်စရာလေး။း)
no sea said...
Please help us to know more about Business issues!!!
ချောရေ ၀က်သားချဉ်လုပ်နည်းလေး ပေးပါနော်